အညွှန်း - Worldwide Church of God Switzerland
မိဘများအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏သားသမီးများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင် များစွာသင်ယူနိုင်ပါသည်။ ရေကူးတတ်အောင် သင်ပေးတဲ့အခါ ရေထဲ ပစ်ချရုံတင်မကဘဲ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ပါ။ မဟုတ်ဘူး၊ ငါသူမကို ငါ့လက်ထဲမှာ ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ရေထဲမှာ တချိန်လုံး သယ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ မဟုတ်ရင် သူတို့ဟာ ရေထဲမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှုပ်ရှားဖို့ ဘယ်တော့မှ သင်ယူမှာ မဟုတ်ဘူး။ ငါတို့သားကို ရေနဲ့ရင်းနှီးအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါ အစပိုင်းမှာတော့ နည်းနည်းကြောက်သွားပြီး "ဖေဖေ၊ သားကြောက်တယ်" လို့အော်ပြီး ကျွန်မကို ဖက်ထားလိုက်တယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ ကျွန်တော် သူ့ကို အားပေးတယ်၊ သူ့ကို ကောင်းကောင်းပြောပြီး ဒီပတ်ဝန်းကျင်အသစ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ကူညီပေးခဲ့တယ်..။
Chaff သည်ကောက်ပဲသီးနှံ၏အပြင်ဘက်ရှိအခွံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအဖြစ်သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ အခွံများကိုဖယ်ရှားရန်စပါးစေ့များကိုကြိတ်သည်။ စက်မှုလယ်ယာမတိုင်မီရက်များအတွင်းမှဖွဲများကိုလေတိုက်ခတ်သည်အထိလေနှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲပစ်ခြင်းဖြင့်ကောက်နှံများနှင့်ဖွဲများကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုခွဲခြားထားသည်။ အဖွဲသည်တန်ဖိုးမရှိသောအရာများနှင့်စွန့်ပစ်ရန်လိုအပ်သောအရာများအတွက်ဥပစာအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဓမ်မဟောငျးကမျြးကလူဆိုးတို့ကိုလွင့်နေသောဖွဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်သတိပေးသည်။ «မတရားသောသူတို့မူကား၊ ထိုမျှမက၊
Sünde ist Gesetzlosigkeit, ein Zustand der Rebellion gegen Gott. Seit der Zeit, da die Sünde durch Adam und Eva in die Welt kam, steht der Mensch unter dem Joch der Sünde – einem Joch, das nur durch Gottes Gnade durch Jesus Christus weggenommen werden kann. Der sündige Zustand der Menschheit zeigt sich in der Tendenz, sich selbst und die eigenen Interessen über Gott und seinen Willen zu stellen. Sünde führt zu Entfremdung von Gott und zu Leid und Tod. Weil alle Menschen Sünder sind, bedürfen sie auch alle der Erlösung, die Gott durch seinen Sohn anbietet. (1. ဂျိုဟန် 3,4; ရောမ 5,12; 7,24စာ-၂၀; မားကပ် 7,21စာ-၁၀; ဂလာတိ 5,19စာ-၉; ရောမ 6,23; 3,23-24) Das…
ခရစ်ယာန်များစွာသည်ဤအရာကိုမသေချာမရေရာပါ၊ ဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုချစ်ဆဲပါလား။ ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုနှင်ထုတ်လိမ့်မည်ဟု ပို၍ စိုးရိမ်သည်။ သင်အလားတူကြောက်ရွံ့မှုမျိုးရှိနိုင်သည်။ ခရစ်ယာန်တွေကဘာကြောင့်ဒီလောက်စိုးရိမ်ပူပန်ကြတာလဲ။ အဖြေမှာရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိတယ်။ သူတို့၏အမှားများ၊ အမှားများ - သူတို့၏အပြစ်များကိုသူတို့နာကျင်စွာခံစားနေရသည်။ ဘုရားသခင့်မေတ္တာတော်နှင့်သူတို့၏ကယ်တင်ခြင်းပင်ဘုရားသခင့်စကားကိုနားထောင်ခြင်းအပေါ်များစွာမူတည်ကြောင်းသူတို့သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ဒါကသူတို့ဘုရားသခင်ဆီအမြဲပြောတာပဲ ...
“ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်မမြင်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်မယုံတော့ပါ” ဟုလူတို့ပြောသောအခါကျွန်ုပ်သည်ပျော်စရာရှိသည်။ လူအများကဘုရားသခင်တည်ရှိကြောင်းသံသယဖြစ်ခြင်း၊ သူသည်လူအားလုံးကိုသူ၏ကျေးဇူးတော်နှင့်ကရုဏာတော်၌ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုမကြာခဏပြောတတ်ကြသည်။ မှားယွင်းခြင်းမပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သံလိုက်သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုမတွေ့ရသော်လည်း၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုများမှတဆင့်တည်ရှိကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ထောက်ပြသည်။ လေ၊ ဆွဲငင်အား၊ အသံနှင့်အတွေးပင်လျှင်အလားတူပင်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ စိတ်ကူးမရှိသောအသိပညာ” ဟုခေါ်သောအရာကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်။ ငါ "မမြင်ရတဲ့ ... ကဲ့သို့သောအသိပညာထောက်ပြလို
ကောရိန္သုမြို့သားများထံ ပေါလု၏ဒုတိယစာတွင်၊ သူသည် ယုံကြည်သူများ၏အသက်တာကို လက်တွေ့ကျသောနည်းများဖြင့် အံ့ဖွယ်ရွှင်လန်းမှုလက်ဆောင်ကို မည်သို့ထိမိကြောင်း ထူးမြတ်သောပုံဥပမာတစ်ခုပေးခဲ့သည်။ “ချစ်လှစွာသော ညီအစ်ကိုတို့၊ မာကေဒေါနိပြည် အသင်းတော်တို့၌ ပေးတော်မူသော ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ငါတို့သည် သင်တို့အား သိစေသည်” (၂ ကော. 8,1). Paulus gab nicht bloss einen unbedeutenden Bericht – er wollte, dass die Geschwister in Korinth in ähnlicher Weise auf die Gnade Gottes wie die Gemeinde in Thessalonich reagierten. Er wollte ihnen eine richtige und fruchtbare Antwort auf Gottes Grosszügigkeit beschreiben. Paulus merkt an, dass die Mazedonier „viel Bedrängnis“ hatten und „sehr arm“ waren –…
Das Alte Testament ist eine Geschichte von frustrierter Hoffnung. Es beginnt mit der Offenbarung, dass Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen wurden. Aber es dauerte nicht lange, bis die Menschen sündigten und aus dem Paradies vertrieben wurden. Aber mit dem Wort des Gerichts kam auch ein Wort der Verheissung – Gott sprach zu Satan, dass einer der Nachkommen Evas ihm den Kopf zertreten würde (1Mo 3,15). Ein Befreier würde kommen. Eva hat wahrscheinlich gehofft, dass ihr erstes Kind die Lösung sein würde. Aber es war Kain – und er war Teil des Problems. Die Sünde herrschte weiter und es wurde schlimmer. Es gab eine teilweise Lösung zur…
ဘုရားသခင်ကို ၀ င်ရောက်ကူညီပေးပါလို့တောင်းပန်လိုက်တဲ့အခါမင်းဟာစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမြင်ဖူးပြီထင်တယ်။ သငျသညျအံ့ဖွယ်အဘို့ဆုတောင်းခဲ့ကြပေမည်သိသာပေမယ့်အကျိုးမရှိ အဆိုပါအံ့ဖွယ်အကောင်အထည်မပေးခဲ့ပါဘူး လူတစ် ဦး ၏ကုသမှုအတွက်ဆုတောင်းချက်များဖြေကြားခံရကြောင်းသင်သိရှိရ။ သင် ၀ မ်းသာမိသည်ဟုလည်းကျွန်ုပ်ယူဆပါသည်။ အနာပျောက်အောင်ဆုတောင်းပေးပြီးတဲ့နောက်နံရိုးတွေပေါက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုငါသိတယ်။ ဆရာဝန်ကသူမကို“ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်လုပ်ပါ ဦး” လို့အကြံပေးခဲ့တယ်။ ကျမတို့အများစုကငါတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေတယ်ဆိုတာငါတို့သိလို့အများစုကနှစ်သိမ့်မှုနဲ့အားပေးမှုခံစားခဲ့ရတယ်။ အခါတိုင်းငါအမြဲအားပေးတိုက်တွန်းပါသည်
Christliche finanzielle Haushalterschaft bedeutet, mit den persönlichen Ressourcen auf eine Weise umzugehen, die die Liebe und Grossherzigkeit Gottes widerspiegelt. Darin inbegriffen ist die Verpflichtung, einen Teil der persönlichen Finanzmittel für das Werk der Kirche zu spenden. Aus Spenden trägt sich die gottgegebene Mission der Kirche das Evangelium zu predigen und die Herde zu weiden. Im Geben und Spenden spiegeln sich Verehrung, Glaube, Gehorsam und die Liebe des Gläubigen zu Gott, der die Quelle der Erlösung und der Geber aller guten Dinge ist. (1. ဓာတ်ဆီ 4,10; 1. ကောရိန္သု 9,1နှစ်ဆယ် 2. ကောရိန္သု 9,6-11) Armut und Grosszügigkeit Im zweiten…
ခရစ္စမတ်ကာလမှာ အလင်းရောင်မရှိရင် မီးတွေက ဘာများဖြစ်မလဲ။ မီးရောင်များစွာဖြင့် ရင်ခုန်စရာ ခရစ္စမတ် ခံစားချက်ကို ဖြန့်ကျက်လိုက်သော ညနေခင်းများတွင် ခရစ္စမတ်ဈေးများသည် လေထုအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ မီးလုံးများစွာဖြင့် ခရစ္စမတ်နေ့အတွက် ထွန်းလင်းနေသော တကယ့်အလင်းရောင်ကို လက်လွှတ်ရန် လွယ်ကူသည်။ “(ယေရှု) အထဲ၌ အသက်ရှိ၏၊ အသက်သည် လူတို့၏အလင်းဖြစ်၏” (ယော 1,4). In den Tagen, als Jesus vor mehr als 2000 Jahren in Bethlehem geboren wurde, lebte in Jerusalem ein frommer alter Mann namens Simeon. Der Heilige Geist hatte Simeon offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus des Herrn gesehen hatte. Eines Tages…
ငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကငါတို့မကြာခဏ dodgeball၊ ဘော်လီဘောနဲ့ဘောလုံးကစားတယ်။ ငါတို့အတူတူမကစားခင်မှာငါတို့နှစ်သင်းဖွဲ့ခဲ့တယ်။ ပထမ ဦး စွာကစားသမားနှစ် ဦး ကိုအလှည့်ကျရွေးချယ်သောအသင်းခေါင်းဆောင်နှစ် ဦး ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ပထမအသင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကစားသမားများကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္မှမပါ ၀ င်သောသူများကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်းသည်အလွန်ရှက်စရာကောင်းလှသည်။ ပထမတွင်မပါခြင်းသည်ငြင်းပယ်ခံရခြင်းနှင့်မလိုလားသောဖြစ်ခြင်း၏လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ငြင်းပယ်ခံရသောလောကတွင်နေထိုင်သည်။ ငါတို့အားလုံးတစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းနဲ့ကြုံဖူးတယ်။ ရှက်တတ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ်မင်းပါဝင်လာနိုင်တယ်။
ယေရှုမသေဆုံးမီသူတို့နှင့်အတူနောက်ဆုံးညစာစားပွဲဖြစ်မည်ဟုတပည့်တော်များမသိခဲ့ကြပါ။ သူတို့ဟာအရင်ကကြီးကျယ်တဲ့အဖြစ်အပျက်များကိုကျင်းပရန်အတူတကွစားလိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့ကြပြီး၊ သူတို့ရှေ့တွင်ပိုမိုကြီးမားသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိနေသည်ကိုမသိဘဲ။ အတိတ်မှညွှန်ပြခဲ့သမျှကိုပြည့်စုံစေသည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု။ အရမ်းထူးဆန်းတဲ့ညတစ်ညပါ တစ်ခုခုမှားယွင်းနေသည်၊ တပည့်တော်များသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုမသိခဲ့ကြပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးယေရှုသည်သူတို့၏ခြေကိုဆေးပေးခဲ့သည်။ ယုဒသည်မိုးရာသီအပြင်ဘက်တွင်ခြောက်သွေ့။ ဖုန်ထူသောနေရာဖြစ်ခဲ့သည်မှာသေချာသည်။ တကယ့်ကိုမြှုပ်နှံထားသူ ...
ထာ၀ရဘုရားသခင်၏ သားတော်ယေရှုသည် လူဖြစ်လာသည်။ ဒီလိုမဖြစ်ဘဲနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုတာ မရှိနိုင်ပါဘူး။ တမန်တော်ယောဟန်က ဤသို့ဆိုသည်– ဤနည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကို သင်တို့သိမှတ်သင့်သည်– ယေရှုခရစ်သည် လူ့ဇာတိသို့ကြွလာသည်ဟု ဝန်ခံသောဝိညာဉ်တိုင်းသည် ဘုရားသခင်ထံမှဖြစ်၏။ ယေရှုကို မဝန်ခံသော ဝိညာဉ်တိုင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ ထိုမှတပါး သင်တို့ကြားရသော အန္တိခရစ်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ကြွလာ၍ ယခု ဤလောက၌ ရှိနေပြီဖြစ်သည်။1. ဂျို 4,2စာ-၃)။ သခင်ယေရှု၏ အပျိုကညာမွေးဖွားခြင်းတွင် ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် ထာဝရဘုရားသခင်၏သားတော်အဖြစ် ကျန်ရှိနေချိန်တွင် အပြည့်အဝလူသားဖြစ်လာကြောင်း ရှင်းပြသည်။ အဆိုပါ…
လူတွေကဘုရားသခင်ကအချိန်မှန်ကိုအမြဲတမ်းရွေးချယ်တယ်လို့ပြောချင်ကြတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာစတင်သူများ၏သင်တန်းကိုကျွန်ုပ်မှတ်မိနေသည့်အချက်တစ်ခုမှာယေရှုမြေကြီးသို့အချိန်တန်လျှင်ရောက်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်သိရှိသောအခါကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သော“ အေ့” အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုနှင့်ပတ်သက်သောပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးပြည့်စုံနိုင်ရန်အတွက်စကြာ ၀ inာရှိအရာအားလုံးသည်သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာမည်သို့ရောက်ရှိရမည်ကိုဆရာတစ် ဦး ကရှင်းပြခဲ့သည်။ ရှင်ပေါလုသည်ဂလာတိအသင်းတော်၌ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်ခြင်းနှင့်လောကတန်ခိုးများကိုကျွန်ခံခြင်းအကြောင်းပြောခဲ့သည်။ “ အချိန်တန်သောအခါဘုရားသခင်သည်သားတော်ကိုအမျိုးသမီးတစ် ဦး မှမွေးဖွားခဲ့ပြီး…
“ညီအစ်ကိုတို့၊ အသက်ရှင်၍ သန့်ရှင်း၍ ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသော ပူဇော်သက္ကာအဖြစ် သင်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကို ပူဇော်ကြရန် ဘုရားသခင်၏ ကရုဏာတော်အားဖြင့် ယခု ငါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဝတ်ပြုရေးဖြစ်ပါစေ” (ရောမ ၁2,1) အဲဒါက ဒီတရားဒေသနာပါ။ စကားလုံးတစ်လုံး ပျောက်နေတာကို သင် မှန်ကန်စွာ သတိထားမိတယ်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဝတ်ပြုရေးအပြင်၊ ဤစကားလုံးသည် ဂရိဘာသာစကား "logiken" မှဆင်းသက်လာသည်။ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို ထင်ရှားစေသောအမှုတော်သည် ယုတ္တိတန်သည်၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ ငါဘာကြောင့်ရှင်းပြတာလဲ။ လူသားအမြင်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အရာအားလုံးကို လူသားယုတ္တိဖြင့် ရှုမြင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် ဘုရားသခင်ကို ဝတ်ပြုသောအခါ၊
ဘုရားသခငျသညျသားတျောဘုရားသခငျသညျထာဝရဘုရားထံမှဖွားမြင်, ထိုနတ်ဘုရား၏ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူသည်ခမည်းတော်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်သည်။ သူအားဖြင့်ဘုရားသခင်အားဖြင့်အရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ခမည်းတော်သည်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စေရန်ဇာတိပကတိ၌ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပbyိသန္ဓေယူခဲ့ပြီးအပျိုစင်မာရိမှမွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည်ဘုရားသခင်နှင့်ပြည့်ဝသူဖြစ်ပြီးလူသားတစ် ဦး တည်း၌သဘာဝတရားနှစ်ခုပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ သူသည်ဘုရားသခင့်သားတော်နှင့်အလုံးစုံတို့၏အထွLord်အမြတ်ဖြစ်တော်မူသောကြောင့်ဂုဏ်အသရေ ရှိ၍ ကိုးကွယ်ထိုက်၏။ ပရောဖက်ပြုထားသောလူသား၏ရွေးနုတ်ရှင်အနေနှင့်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက်အသေခံခဲ့သည်၊
သင်၏အခြေအနေမည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာများမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သနားကြင်နာတတ်သောဘုရားသခင်သည်သစ္စာစောင့်သိကာကျွန်ုပ်တို့၏အကြွင်းမဲ့ချစ်မြတ်နိုးသောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်။ ပေါလုရေးသားခဲ့သည့်အတိုင်းမည်သည့်အရာကမျှဘုရားသခင်ထံမှကျွန်ုပ်တို့ကိုမဖယ်ရှားနိုင်သကဲ့သို့သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လည်းမကွာစေနိုင်ပါ။ ဆင်းရဲခက်ခဲမှုနှင့်ကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်နိုင်သလား။ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုလား။ ငတ်မွတ်နေတာလား ဆင်းရဲမွဲတေမှု? အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအကြမ်းဖက်သေခြင်းလော။ သန့်ရှင်းသောကျမ်းစာ၌ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အမှန်တကယ်ဆက်ဆံခြင်းခံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်နေရာတိုင်းတွင်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရပြီးသတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သိုးကဲ့သို့သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသည်။ သို့သော်နေဆဲ: ဆင်းရဲဒုက္ခအလယ်၌ငါတို့အားလုံးအောင်ပွဲ ...
သူ၏ဧဝံဂေလိတရားအဆုံးသတ်ခါနီးတွင် တမန်တော်ယောဟန်၏ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောမှတ်ချက်များကို သင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်– “ဤစာအုပ်တွင်မရေးထားသော အခြားနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကို ယေရှုသည် တပည့်တော်များရှေ့၌ ပြုတော်မူသည်..။ ရေးလိုသောစာအုပ်များကို ကမ္ဘာက ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်လိမ့်မည်မထင်။” (ယော၊ ၂၀:၃၀၊ ၂။1,25) ဤမှတ်ချက်များကို အခြေခံ၍ ခရစ်ဝင်ကျမ်း လေးစောင်ကြား ခြားနားချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ဖော်ပြထားသော ဖော်ပြချက်များသည် ယေရှု၏အသက်တာ၏ ပြီးပြည့်စုံသော ခြေရာများအဖြစ် မရေးထားကြောင်း ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ John က သူ့ရဲ့ အရေးအသားတွေဟာ ဒီအကြောင်းကို ရှင်းပြပါတယ်။
လာဇရုကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောယေရှု၏အဖြစ်အပျက်ကိုသင်သိပါသလား။ သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေနိုင်သည့်တန်ခိုးရှိကြောင်းပြသခဲ့သည့်ကြီးမားသောအံ့ဖွယ်အမှုဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုအဖြစ်အပျက်တွင်များစွာရှိသည်၊ ယောဟန်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြောပြသည်။ ဂျွန်ကဒီပုံပြင်ကိုပြောပြပုံကိုသတိပြုပါ။ လာဇရုသည်ယုဒနယ်တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူဖြစ်သည်။ သူသည်ယေရှုကိုအလွန်ချစ်သောမာသနှင့်မာရိ၏မောင်ဖြစ်သည်။ သူသည်အဖိုးထိုက်သောဘိသိက်ခံဆီကိုသူ၏ခြေရင်း၌လောင်းခဲ့သည်။ ညီအစ်မများသည်ယေရှုကို“ သခင်၊ ချစ်တော်မူသောသခင်၊ ကြည့်ရှုတော်မူပါ။
ယုံကြည်သူများ၏အမွေသည် ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများအဖြစ် ခရစ်တော်၌ ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ထာဝရအသက်ဖြစ်သည်။ ယခုပင် ခမည်းတော်သည် ယုံကြည်သူများအား သားတော်၏နိုင်ငံတော်သို့ လွှဲပြောင်းပေးတော်မူ၏။ သူတို့၏အမွေကို ကောင်းကင်ဘုံ၌ သိမ်းဆည်းထားပြီး ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာချိန်တွင် ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်သောသန့်ရှင်းသူများသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တွင် စိုးစံကြသည်။ (1. ဂျိုဟန် 3,1နှစ်ဆယ် 2,25; ရောမ ၈:၁၆-၂၁; ကောလောသဲမြို့ 1,13; ဒံယေလ 7,27; 1. ဓာတ်ဆီ 1,3စာ-၂၈; epiphany 5,10) Die Belohnungen, Christus nachzufolgen Petrus fragte Jesus einmal: „Da fing Petrus an und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt;…
လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း၌မျက်မမြင်တစ် ဦး သည်သူ့အားအော်ဟစ်နေသည်။ သူသည်ယေရှု၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်လိုပြီးကြီးမားသောကောင်းချီးများကိုခံစားနေရသည်။ ယေရိခေါမြို့ကနေလမ်းမှာ Timaeus ရဲ့သားမျက်မမြင်သူတောင်းစား Bartimaeus လမ်းဘေးမှာထိုင်နေတယ်။ သူသည်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရန်သူတို့၏မျှော်လင့်ချက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့သူများစွာအနက်မှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အခြားသူများ၏ရက်ရောမှုအပေါ်မူတည်သည်။ ငါတို့အများစုဟာဘာမိုင်ယပ်စ်လိုဘာစားတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးရှင်သန်နိုင်ဖို့မုန့်ကိုတောင်းဖို့ဒီအခြေအနေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမခန့်ထားနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ယေရှုသည်ယေရိခေါမြို့ကိုတပည့်တော်များနှင့်လည်းကောင်း၊
ကတိပြုထားသည့်အတိုင်း၊ ယေရှုခရစ်သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တွင် လူအားလုံးကို တရားစီရင်ရန်နှင့် အုပ်ချုပ်ရန် မြေကြီးပေါ်သို့ ပြန်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် ဘုန်းတန်ခိုးတော်ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအဖြစ်အပျက်သည် သန့်ရှင်းသူတို့၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ဆုလာဘ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ (ယော ၁4,3; epiphany 1,7; မဿဲ ၂4,30; 1. သက်သာလောနိတ်မြို့ 4,15စာ-၁၇; ဗျာဒိတ် ၂2,12) Wird Christus zurückkehren? Was denkt Ihr, wäre das grösste Ereignis, dass auf der Weltbühne passieren könnte? Ein weiterer Weltkrieg? Die Entdeckung eines Heilmittels für eine fürchterliche Krankheit? Weltfrieden, ein für allemal? Oder Kontakt mit ausserirdischer Intelligenz? Für Millionen…
ကျွန်ုပ်သည် စွဲလမ်းသူဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံရန် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရော ပတ်ဝန်းကျင်ကပါ လိမ်ညာခဲ့တယ်။ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ အရက်၊ ကိုကင်း၊ ဟီးရိုးအင်း၊ ဆေးခြောက်၊ ဆေးလိပ်၊ ဖေ့စ်ဘုတ်နဲ့ တခြားမူးယစ်ဆေးတွေလို အရာမျိုးစုံကို စွဲစွဲလန်းလန်း စွဲလမ်းနေသူတွေလည်း တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ တစ်နေ့မှာ အမှန်တရားကို ရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။ စွဲနေတယ်။ ကျွန်တော်အကူအညီလိုအပ်တယ်! စွဲလမ်းမှု၏ရလဒ်များသည် ကျွန်ုပ်လေ့လာဖူးသမျှလူတိုင်းအတွက် အမြဲတူညီနေပါသည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဘဝအခြေအနေများ ဆိုးရွားလာသည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ ဆက်ဆံရေးသည် လုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ…
ယေရှုသည် သူ၏အသက်၊ အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သမျှ၊ ထိုက်တန်သည် သို့မဟုတ် စိတ်ကူးပင်ကြည့်နိုင်သည့်အရာထက် များစွာသာလွန်သောတန်ဖိုးတစ်ခုပေးခဲ့သည်။ တမန်တော်ပေါလုက အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြခဲ့သည်– “မှန်ပါသည်၊ ငါ၏သခင်ယေရှုခရစ်အား ပြင်းပြသောအသိပညာကို ထိခိုက်စေသည်ဟု ငါယူဆနေသေးသည်။ အကြောင်းမူကား၊ ဤအရာအလုံးစုံတို့သည် ငါ့အား ဒဏ်ခတ်၍ ခရစ်တော်ကို အောင်နိုင်စေခြင်းငှာ အညစ်အကြေးဟု ငါမှတ်ယူ၏။” (ဖိ၊ 3,8) ခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် အသက်ရှင်၍ နက်ရှိုင်းသော ဆက်ဆံရေးတစ်ခုသည် ရေတွင်းခန်းခြောက်သည့်အရာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အဆုံးမရှိ အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော တန်ဖိုးရှိကြောင်း ပေါလု သိခဲ့သည်။
ပင်တေကုတ္တေပွဲ - for ၀ ံဂေလိတရားအတွက်ခွန်အား
ချစ်သူများနေ့ - ချစ်သူများနေ့
ospelဝံဂေလိတရား - ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဖိတ်ကြားခြင်း
ယရှေု - ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အတွက်ဉာဏ်ပညာ!
မ5ဲ ၅: တောင်ပေါ်တရားတော် (အပိုင်း ၁)
1914-1918: "ဘုရားသခင်ကိုသတ်သောစစ်ပွဲ": အဖြေတစ်ခု
ဆာလံ ၉ နှင့် ၁၀
Karl Barth: ဘုရားကျောင်း၏ပရောဖက်
ငရဲ၏ထာဝရညှဉ်းဆဲခြင်း - ဘုရားသခင့်လား၊
ရှောလမုန်မင်းကြီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 17 ၏မိုင်းများ
ယောသပ် Tkach ထံမှအတွေးများအတွက်အစားအစာ
သမ္မာကျမ်းစာ - ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်လော